29 Disembar, 2003, 06:17 GMT; 09:17 SGA
Siyaasadda gudaha ee Eritrea oo adduunku diiradda saarayo
Iyadoo xiisada u dhaxeysey Ethiopia iyo Eritrea ay mar kale kacdey ayaa adduunka haatan diiradda saarayaa siyaasdda gudaha ee Eritrea.
Sida ay qabto dowladda Eritrea, siyaasiinta iyo suxufiyiinta ku xiran dalkaas tan iyo bishii September ee sanadkii 2001da, waa dad ay dowladda Eritrea u aragto iney yihiin Khaa'imo waddan, iyo kuwa ka wakiillo ah waddamo shisheeye.
Dadkaas u xiran dowladda Eritrea eheladoodu ma ogo halka lagu hayo, mana jiraan qorshe haatan la ogyahay oo qof ka mid ah maxaabiistaas maxkamad lagu geynayo.
Sanadkan bilowgiisii, hey'adda caalamiga ee u ololeysa xuquuqda aadamaha ee Amnesty International ayaa soo sheegtey in Eritrea ay ku xiran yihiin waxa ay u bixisey maxaabiista damiiraka. Waxa Amnesty ay sheegtey in maxaabiistaas loo xirey iney ku hadleen wax dowladda mucaard ku ah ama ay diideen adeegga miletriga qasabka ah ee Eritrea dadkeed ku soo rogtey.
Dhinaca diintana, warbixin ay Wasaaradda Arimaha Dibadda ee Mareykanku soo saartey bishan December een ku jirno, waxa lagu sheegey in xogtii laga ururshey arimaha diinta ee sanadkii hore ay muujineyso in ixtiraamka loo hayo xoriyadda diintu ay weli Eritrea ka sii xumaaneyso.
Waddanka Eritrea, sharci ahaan afar ka tirsan kooxaha diimaha ee dalkaas oo kaliya ayaa loo ogolyahay iney caabudaan waxa ay aaminsanyihiin.
Kooxaha kale ee ku dhaqma wax ka duwan kuwa la fasaxey, waa in ay joojiyaan caabudiddooda ilaa inta ay dowladda ka helayaan rukhsad ay ku sii wataan madhabta ama dariiqooyinka diimeed ee ay jecelyihiin.
Ilaa iminka ma jirto cid ruklhsad diimeed la siiyey oo aan ka ahyn afartii ay dolowadda Eritrea horey u fasaxdey, qofkii lagu qabto isgoo si qarsoodi ah ugu cibaadeysanaya wax aysan dolwaddu fasaxinna waa la xiraa.
Dowladda Eritrea muhimadda ayeey ugu fadhidaa xayiraadaha la xiriira xoreytul-qowlaka iyo furfurnaata dalka ay saartey sanadkii 2001da, sabatuna wax at tahay baa la leeyahay iyadoo jiritaankeeda Eritrea ay weli cabsigalineyso dowladda Ethiopia.
Iyadoo hadaba haatan ay dib u dhacdey rajadii laga qabey in xiriirka Eritrea ay la leedahay Ethiopia la wanaajiyo oo caadi laga dhigo, ayaaney haatan soo dhaweyn shuruudaha ay dowladdu ku xireyso xoriyad gaar ah ee dadkeedu heli karo.